I-iPhone 8 iyamelana ngakumbi kunokuba ibonakala ngathi xa uyijonga kuqala | Iindaba zeGajethi
El iPhone 8 Sele ikhona kwimarike kwaye oku kuqala kuhlalutyo okanye iividiyo ekuchaseni isixhobo esitsha esiphathwayo sika-Apple sele siqalisile ukufika. Nangona uyibona ngamehlo akho kwividiyo eyintloko yeli nqaku, sinokukuxelela ngokhuseleko olupheleleyo ukuba i-iPhone 8 iyaxhathisa kunokuba ibonakala, ngaphandle kweglasi entsha ejikeleze itheminali.
Kwaye oko Kuvavanyo lweklasikhi esele yenziwe nguJerryRigEverything, kuyaboniswa ukuba i-iPhone entsha iyakwazi ukumelana nokukrwela okuninzi ngazo zonke iintlobo zezixhobo kunye nokusebenza ngokuthe ngqo kokukhanya kwecuba., ukuba ekuqaleni uphawu emnyama esikrinini, leyo shwaka emva kwemizuzwana embalwa.
Ukuqala kwasekuqaleni, umaleko weglasi yeGorilla yesikrini inika ukuxhathisa okuphezulu kakhulu, kwaye iscreen se-iPhone 8 entsha khange siqale ukubonisa ukonakala kude kube yimikrwelo yenqanaba 6. Sifumene isiphumo esifanayo xa sizama krwela icala elingasemva, elingafaniyo noko sinokucinga ngalo sonke, liphethe phantse nantoni na eyenzekileyo okanye injongo yokonakalisa iglasi.
Ngokubhekisele ekusongeleni i-iPhone 8, njengoko kwenzekile kungekudala kwi-iPhone, sinokulibala ngayo, kwaye yile glasi inika ukungqinelana okukhulu kwisiphelo sendlela, iyenza ukuba ingabinakho ukuyisonga, ubuncinci ngendlela engaphezulu okanye engaphantsi kwesiqhelo (ngezandla zakho).
Ucinga ntoni ngokuxhathisa okuphezulu kwe-iPhone 8 entsha?. Sixelele uluvo lwakho kwisithuba esibekelwe amagqabantshintshi kule posi okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-iPhone 8 iyamelana ngakumbi kunokuba ibonakala ngathi uqala ukuyibona